Mmelite Pack3 maka LMDE dị | Site na Linux
Ruo oge ụfọdụ, ndị mmepe nke LMDE kpebiri ịnọgide na-enwe nchekwa nke ha dabere na Debian, iji nwee ike ịchịkwa nchịkọta ma malite usoro mmelite ka ha banyere ụlọ ọrụ gọọmentị Nyocha Debian.
Anyị na-ekwu maka okwu a na a post, na mgbe mbipute nke NXU 201109 nke a biara na ya Mmelite 2 (Ihe ngwugwu nke abuo). Ọfọn, na blog nke Mint Linux nnweta nke Mmelite 3, naanị maka ndị ọrụ LMDE dị ka bụ mgbagha.
Mgbanwe nke mmelite a na-eweta bụ:
Alaka ohuru nke kernel 3.0.
Ebe nchekwa nke Security y multimedia bụ ugbu a akụkụ nke repos nke LMDE.
Iji nwee ọ enjoyụ na mmelite a, anyị ga-etinye na faịlụ anyị: /etc/apt/sources.list the lines:
Ma melite site na iji Nchịkọta Nwelite. Dị ka ha na-ekwu na blog, ọ bụrụ na ị hụ mmelite maka ngwugwu mintupdate-debian ga-anara ya ma chere maka Nchịkọta Nwelite Malitegharịa ekwentị na-akpaghị aka. Nke a na-eme n'ihi na Nchịkọta Nwelite a na-emelite ya tupu ngwa ndị ọzọ.
Ọzọkwa, Nchịkọta Nwelite enwetala mgbanwe ụfọdụ. M na-ekwu okwu verbatim:
N'oge a na-ede post blọọgụ a, ụdị kachasị ọhụrụ nke mintUpdate-debian bụ 1.0.4. Site na ụdị a gaa n'ihu, njikwa mmelite ahụ nwere ike ịhụ isi mmalite APT gị ma gwa gị ma ha ahazie ya nke ọma.
Na mgbakwunye, banyere mmelite ha na-agwa anyị:
N'oge mmelite a, a ga-akpali gị maka ihe ole na ole. Otu n'ime ha dị ezigbo mkpa .. kernel ọhụrụ ahụ ga - ajụ gị ebe ị ga - etinye Grub. Nzaghachi na ọnọdụ nke nchịkọta nhọrọ Grub gị ugbu a (nke kachasị sistemụ bụ "/ dev / sda").
Ya mere, ị maara, oke akụkọ maka ndị ọrụ LMDE. Nwere ike ịhụ ntinye zuru ezu na Bekee na njikọ a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Mmelite Pack3 maka LMDE dị
Ndewo. Site na "ohuru" o di nma? Ruo ugbu a, anọ m na-abata.
Ajuju ngwa ngwa. Kedu mgbe gnome-shell ga-amalite?
Ọ dị mma, ọ bụrụ na ha na-ekwupụta na ọkwa ọkwa gọọmentị na ụlọ ọrụ ndị ahụ na-arụ ọrụ, mgbe ahụ ee, Kacha ọhụrụ ga-ezuru. Amabeghị m mgbe Gnome-Shell ga-abanye, mana ọ dị m ka na Debian Testing (nke bụ ihe nkwụghachi nke LMDE na-eji) nchịkọta ndị ahụ abanyebeghị.
Ọ bụrụ na ndị kachasị ọhụrụ bụ ndị kachasị emelitere mana na-enweghị nkwụsi ike m ga-etinye ndị ahụ
Otu ajụjụ: Enwere m ebe a na-eme mkpọtụ, mana na ebe ndị a ha na-ekwu ule bụ otu ihe ahụ? Ekwesịrị m ịhapụ ebe a na-eme mkpọtụ dịka ha dị ma ọ bụ, na ntụle, wepu ha ma debe ndị nke 3?
Daalụ maka nzaghachi n'oge.
Wheezy ugbu a bụ ngalaba ule ugbu a, ya bụ, ha bụ otu. Mgbe Wheezy gara Stable, mgbe ahụ Ule ga-abụ nsụgharị ọzọ. A na-atụ aro ka ị jiri LMDE repositories si Nchịkọta Pack 3 ma ọ bụrụ na ịchọghị ahụmịhe ọjọọ.
Daalụ nke ukwuu, ndị ọrụ LMDE niile kwesịrị ịtụle ozi a, ọ na-efu efu.
M na-eji distro a ọnwa ole na ole ugbu a ma ọ na-aga nke ọma, ọ dị ezigbo mma.
Kwere na o doro anya na ị ga-agbakwunye ebe nchekwa ndị a ma melite site na njikwa melite mana. . . Kedu ihe anyị ga-eme na nchekwa nke ndabara na sources.list? Anyị ga-ewepụ ha na mbụ, nri?
O doro anya na .. just ga-agbakwunye LMDE Repositories ọhụrụ.